Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal:Jigjiga Maxaabiis baanu siidaynay! Been magoogan kama koraan Woyaanaha & Gacanyarihiisu! By:Xaaji M/rashiid.
Maqaal:Jigjiga Maxaabiis baanu siidaynay! Been magoogan kama koraan Woyaanaha & Gacanyarihiisu! By:Xaaji M/rashiid.
Posted by Wariye Qaran	/ March 12, 2018
Halgamayaal Sabankan aynu joogno waa mid yaab leh waxaana ugu wacan siyaasado gurracan oo dhexmaaxaya caalamka iyo cadaaladii oo yaraatay. Waa aduun shacabwaynaha soomaaliyeed ay ku dulmanyihiin meel ay joogaamba, Waxaa arintaas kuu cadeynaya in Badihii iyo Dekedihii lagu hor iibsanayo shacabka, Waxyaabaha yaabka leh ee saaxada kusoo kordhay waxaa kamid ah in halgamaaga lagu bahdilo umadda soomaaliyeed horteeda! Ilaa la gaadhsiiyay heer loo afduubo cadowgii soo jireenka ahaa, Waxaas oo dhan waxaa sabab unoqon kara sidaan isleeyahay masiirkii umadda Soomaaliyeed iyo maamulkii oo gacanta ugalay dad aan ehel uhayn.
Markaan intaas kasoo gudbo, wadanka guumaystaha itoobiya ee sii burburaya ayaa waayahan wada qorshayaal naflacaari ah oo uu ka dhexwado shucuubta kala duwan ee uu jujuubka ku haysto, Wuxuu wadaa iska horkeen, gumaad iyo xabsiyada oo uu ka buuxsaday. Waxaa intaa garab socda dhac, boob, handadaad iyo faroxumayn ay wadaan maleeshiyaadka bilaa akhlaaqda ah ee tuutaha loo xidhay.
Hadaan intaas kudhaafo ararta waxaa wadanka Ogadenya ka hanaqaaday halgan shacbi ah oo ay gadhwadeen kayihiin Jabhada wadaniga xoreynta ogadenya ee lagu soo gaabiyo ONLF/JWXO. Taliska woyaanaha ee Gobolka sida sharcidarada ah ku qabsaday ayaa waxbadan isku dayay inuu damiyo dhuxusha halganka éen soo sheegay. Dhowr sano kahor ayuu soo xaqiijiyay inuuna halganka xaqa ah hor istaagi karin, sidaa darteedna uu bilaabay ergo iyo wadahadal uu la galayo masuuliyiinta halganka.
Wadanka guumaystaha itoobiya ee Afka dhulka kuhaya, Lugahana wadhfinaya, wuxuu wadaa mid kamid ah isku dayadii ugu dambeeyay oo kusocda qaab indho la’aan ah. Waxaa kamid ah tabooyinka qarriban ee uu isticmaalayo inuu asbuucyadii lasoo dhaafay uu baahiyay inuu fasaxayo boqolaal maxbuus oo si dulmi ah ugu xidhnaa Jeel Ogaden jeelka caanka ah ee bahdilka shacabka soomaalida ogadenya. Jeelkaas oo lagu xayndaabay Darbiyo adag iyo Siligyo waxaa ku xareysan kumanaan dadwayne oon waxba galabsanin. Waxaa la aaminsanyahay inay jiraan jeelal kale oo farabadan iyo godad aan qaarkood la aqoonin meel ay kuyaalaan. Waxaa kale oo la aaminsanyahay inay jiraan dad farabadan oo la uus xabaalay qaraabadiina uhaystaan inay xidhan yahiin oo maalin maalmaha kamid ah dib loo arki doono!!.
Hadaan gudaha usii galo qoraalka waxaad la socoteen inay saraakiil kusheegta Woyaanaha iyo gacanyarahooda Cabdi Ilay (Kashleeye) ay maxaabiista jeelka ula qasdeen shax cusub. Waxay jeelka kasoo daadgureeyeen umad ilaahay oo farabadan oo ay ka muuqdaan dayac iyo diif aan la qiyaasi karin. Waxay taasi muujinaysaa inayna dadkaasi helin xuquudii maxaabiista aduunka ee ahaa, Raashin, Dhar, Daawo IWM. Waxaa lagu amray inay Gacmaha kor uwada taagaan tasoo ah bahdil dheeri ah oo saaxada ku cusub. Sikastaba ha ahaatee waxaa la isugu keenay dadkii meel Hool ah oo loogu jeediyay Khudbado lagu karbaashay oo ayna tabarba uhaynin. Intaa Kadib waxaa lagu daad gureeyay xabsiyo kale sida wararka qaar sheegayaan. Saxaafadii caalamka waxaa laga gaday been magoogan, balse maanta taasi ka socon mayso woyaanaha iyo gacanyarihiisa. Sikastaba ha ahaatee ninka Cadowga ku adeegto ee fadhigiisu yahay Jigjiga ayaa wali sii wada inuu jilo Filmaantii beenta ahaa koodii udambeeyay.
Gudoomiyaha halganka lagu xoreynayo Dalka Ogadenya Mudane M.C. Cismaan ayaa cod dheer daaha kaga qaaday xaqiiqada iyo ujeedada guumaystuhu kalahaa qaab dhaqanka liita ee uu maxaabiista kula dhaqmay. Mar uu la hadlayay Saxaafadda xorta ah- Wuxuu sheegay inay ka digtoonaadaan Xaasaska iyo Ehelada maxaabiistu inay aqbalaan shirqoolka loo maleegayo ee ah inay kusoo xaroodaan Jigjiga. Waxaa taas kadhalan karta sida uu sheegay cawaaqib xumo halis ku ah karaamadooda, isagoo dhanka kalana bulshada ugu baaqay inay ku taagnaadaan Jidka gobanimo,doonimada oo ah xalka kaliya ee ay haystaan.
Jeelka ciqaabta ee la baxay Jeel-ogaadeen waa mid taariikhda meel kagali doona, hadii wax la iga waydiin lahaana waxaan odhan lahaa halaga dhigo Goob wufuudda caalamka lagu soo wareejiyo isagoon waxba laga badalin, sidoo kalana loo ogolaado inay bulshada booqasho joogta ah ku tagaan. Isku soo wada duuboo ma’aha markii ugu horeysay een aragno maxaabiista soomaalida Ogadenya oo lagu bahdilayo Kaamerada horteeda, sawirana laga qaadanayo!.
BUSHAARO- SHALAY MARKAAN KHATIMAY QUR’AANKA KARIIMKA AH WAXAAN GANTAAL AHAAN UGU GANAY WOYAANAHA , MEESHA AAN SHACABKA OGADENYA ULA NIYOODAY INUU ILAAHAY XOREEYO.